Warshadaha Router, Gprs Router Industrial, Wcdma Industrial Router - ChiLink
Xidhiidhka xawaaraha sare ee wireless-ka ee tafaariiqda, maamul qalabka meel fog, lagu kalsoonaan karo oo aamin ah, joogteeyo u hogaansanaanta, yareynta kharashka rakibaadda, dayactirka 100% waqtiga shaqada.
Xalalka ChiLink waxay kaa caawinayaan inaad u diyaariso meheraddaada Internetka Waxyaabaha Internetka ee Waxyaabaha (IIoT) adoo adeegsanaya moodeemka siligga ah iyo router-yada si ay ugu xirmaan mashiinnada goobaha warshadaha iyo kuwa xaddidan.
Fikradda deegaanka lama sii iftiimin karo. Ilaalinta deegaanka, horumarinta ilaha iyo adeegsiga, iyo kahortaga masiibooyinka dabiiciga ah dhamaantood waxay ubaahanyihiin macluumaad waqtiyeysan oo sax ah. Iyada oo wax kasta oo ku xiran, way fududahay in la dhiso lana ilaaliyo xiriir iswaafajin ah dhulka.
Noocyada kala duwan ee ChiLink ee la isku halleyn karo, kharash-ku-ool ah, aaladaha siligga ah ee siligga ah waxay bixiyaan isku xirnaansho aan kala go 'lahayn oo loogu talagalay kaabayaasha tamarta muhiimka ah iyo ka baxsan
Noocyada kala duwan ee ChiLink ee qallafsan, si fudud-u-dirista xallinta isgaarsiinta wireless-ka ayaa ku habboon awood u siinta xallinta IoT ee warshadaha gaadiidka laga bilaabo kaabayaasha ilaa gaariga.
Xalalka ChiLink waxaa loo adeegsadaa magaalooyinka adduunka oo dhan si looga caawiyo dawladaha iyo ganacsiyada inay la jaanqaadaan tirada dadka magaalooyinka ku sii kordhaya iyo baahida adeegyada bulshada.
ZR5000 Warshadaha Gacanta 3G / 4G Router
Server Aaladda Serial
ZR1000 Warshadaha Wireless 3G / 4G Router
ZR2000 Warshadaha Gacanta 3G / 4G Router
ZR9000 3G / 4G / 5G Dual Card Qalabka Ruter
Iridda Xakamaynta Hawada Sare ee ZP3000 Warshadaha
ZR1000 Warshadaha Gacanta 3G / 4G Router
Meey 20, 2021
Dhibaato asaasi ah
Dhibaatada caalamiga ah ee yaraanta ayaa ahayd xaalad caan ah oo ku saabsan warshadaha isgaarsiinta shabakadda, illaa iyo haddana lama sii wanaajin. Bixinta guntinta waa fog tahay, iyo walxaha ceyriinka ah waxay sidoo kale wajahayaan xaaladda sare u kaca qiimaha degdegga ah. Chips-yada muhiimka ah ma soo bixi karaan ...
Bandhigga 8-aad ee warshadaha caalamiga ah ee Shanghai iyo robotics-ka ee ChiLink IOT ee 2019 ayaa dhammaanaya
Bandhigga 8-aad ee warshadaha caalamiga ah ee Shanghai iyo robotics-ka ee ChiLink IOT ee 2019 wuxuu ku egyahay dhammaad Waqtiga: Maajo 6-8, 2019 Goobta: Hoolka carwada bandhigga adduunka ee Shanghai b018 Saddexda maalmood ee 8-aad ee isdaba-marinta warshadaha caalamiga ah ee Shanghai iyo bandhigyada aaladaha ...
Hawlaha safarka ee shirkadda
Si loo nasto loona yareeyo cadaadiska, kor loogu qaado isgaarsiinta iyo xiriirka ka dhexeeya asxaabta isla markaana kor loogu qaado saaxiibtinimada, shirkadeenu waxay abaabushay safar dheer oo ay ku tagayso Heyuan markay ahayd Sebtember 15th, 2018. U kaxee si aan ula kulano dhulka barakaysan ee harada. U oggolow shaqaaluhu inay hagaajiyaan isgaarsiinta oo ay fahmaan ...